Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 6)
Dib u eeg batteriga la qaadan karo Mbuynow YN-035P
Waxaan ku dhejineynaa batteriga dibadda ee Mbuynow baaritaanka, awood u leh 20.000 Mah oo awood u leh inuu ku soo dallaco taleefankaaga casriga illaa 7 jeer meel kasta oo aad joogto
Sida loo beddelo heerkulka midabka shaashadda ku jirta Android
Soo ogow sida aan ugu beddeli karno heerkulka midabka shaashadda taleefankayaga Android tallaabooyin fudud.
Muxuu ku-madax-bannaanida taleefankeenna Android ku tiirsan yahay?
Raadi wax badan oo ku saabsan dhinacyada saameeya nolosha batteriga ee taleefankeena Android iyo waxa muhiimka ah in la ogaado.
Sida loo helo akoonno isticmaale badan taleefanka Android
Raadi wax intaa ka badan sida loo helo akoonno dhowr ah oo adeegsadeyaal ah oo ku saabsan taleefankeenna Android oo ay ugu mahadcelinayaan isticmaale badan, oo aan laga helin dhammaan noocyada.
Sida loo beddelo midabka sheekaysiga ku jira Facebook Messenger
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aad u awoodo inaad bedesho midabka ka muuqda wada hadalka ku saabsan Facebook Messenger.
Sida wax looga beddelo rukhsadda barnaamijka ku jira Android
Haddii aad ku daashay inaadan ogeyn barnaamijyada ay xogta ka helayso taleefankaaga casriga ah, hoosta waxaan ku tusi doonaa sida loo ogaado oo wax looga beddelo.
Ma fiicantahay in si joogto ah loo nadiifiyo keydka ku yaal Android?
Raadi wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee nadiifinta kaydka Android badanaa iyo saameynta ay leedahay.
Soo hel khiyaanooyinkan si aad uga hesho waxyaabo badan oo YouTube-ka ah taleefankeenna 'Android' qaab fudud oo aad u hesho fursado badan.
Sida loo hubiyo in akoonkaaga Google la jabsaday
Soo ogow sida aan ku ogaan karno haddii ay soo galeen koontadayada Google iyo sida ugu habboon ee loo ilaaliyo koontada.
Sida looga saaro dhibcaha ciyaarta Ciyaaraha Google Play
Soo ogow sida ugu fudud ee aad u tirtiri karto horumarkaaga ciyaarta adoo adeegsanaya Ciyaaraha Google Play ee taleefankaaga Android.
Sida loo kiciyo mawduuca mugdiga ah ee Evernote: warka weyn ee barnaamijka qoraalada
Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo mawduuca mugdiga ah ee Evernote ee maareeya inuu bixiyo khibrad kale oo ka xiiso badan mawduuca maran.
Facebook Messenger waxay horey u soo bandhigtay tirtirka fariimaha
Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka tirtirka farriinta cusub ee ku soo socda Facebook Messenger isla markaana dhowaan loo isticmaali doono Android.
Sida loo rakibo nooca xasilloon ee caalamiga ah ee MIUI 10 ee Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 4X iyo Redmi Note 6 Pro
Waxaan ku siineynaa soo dejinta iyo isku xirka isku xirka MIUI 10 Global Stable ee Xiami Redmi Note 4, Redmi Note 4X iyo Redmi Note 6 Pro waxaan kuu sharxeynaa sida loo rakibo ROM-yada.
Xiro OS H: Nooca cusub ee nidaamka qalliinka
Soo ogow dhammaan wararka imanaya Wear OS H, nooca cusub ee nidaamka hawlgalka saacadda oo si rasmi ah dhowaan loo bilaabi doono.
Sidee iyo goorta la dalbado magacaaga isticmaale barta Instagram
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan u soo ceshano ama u soo ceshano koontadayada 'Instagram' haddii ay dhacdo jabsiga ama iska dhigista.
Sida loo yeesho wada sheekeysi gaar ah Facebook Messenger
Raadi wax badan oo ku saabsan sida aad ugula sheekaysan karto khaas ah sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka ee Facebook Messenger.
Sidee ayuu u shaqeeyaa habka habeenka "Night Sight" ee Google Pixel
Sixirka qaabka Pixel's Night Sight night waxaa laga helaa algorithms-ka iyo softiweerka ay soo saartay Google-ka weyn.
Sida loogala wadaago internetka taleefankaaga casriga ah
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad la wadaagto xiriirkaaga taleefankaaga casriga ah, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo si dhakhso leh oo fudud.
Sida wax looga beddelo farriimaha Telegram si looga dhigo kuwo hufan
Raadi wax badan oo ku saabsan sida aan ugu samayn karno farriimaha Telegram-ka mid hufan, dhowr tallaabo oo fudud oo ku saabsan barnaamijka.
Sida loo demiyo gariirka kumbuyuutarka ee Android
Haddii aad ka daashay walxaha farta ku fiiqaya markasta oo aad qorto, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo demiyo.
Sida looga furo qof barta Instagram
Raadi wax badan oo ku saabsan sida aan si fudud uga furi karno isticmaaleyaasha kale barta Instagram dhowr tallaabo.
Sida loo xakameeyo Android-ka iyadoo lagu tilmaamayo 2-daan barnaamij qaab soo jiidasho leh
2 barnaamij oo loo yaqaan 'Fingerprint Swipes' iyo 'Edge Gestures' oo kuu ogolaanaya inaad ku maamusho Android-kaaga tilmaamo qaab aadan u maleynin.
[APK] Sida loo soo dejiyo loona rakibo kamaradda Pixel 3 Pocophone F1 iyo Xiaomi Mi 8
Faylka apk ee kamaradda Google Pixel 3 ayaa hadda loo heli karaa in la soo dejiyo oo lagu rakibo Pocophone F1 iyo Xiaomi Mi 8.
Sida loo adeegsado boodhadhka shaashadda ee 'Android'
Soo ogow waxtarka ay leedahay shaqeynta shaashadda shaashadda ee ku jirta Android iyo sida aad si fudud ugu kicin karto taleefankaaga.
Sida loo kiciyo qaab hal gacan oo ku shaqeeya Android kasta oo leh Calaamadeeye Reachability
Abka loo yaqaan 'Reachability Cursor' waxaad kuheli kartaa qaab hal gacan ah taleefankaaga Android adigoon sugin cusbooneysiinta Android.
Sida loo hawlgeliyo mawduuca mugdiga ah ee ku jira barnaamijka Xiriirada
Labadii sano ee la soo dhaafay, waxaan aragnay sida shaashadaha taleefannada gacanta ay u noqdeen hal qeyb oo dheeraad ah ...
Android Q ayaa imaan doonta iyadoo lagu hagaajinayo shaashadda kala qeybsan
Android Q ayaa la imaan doonta hagaajinta shaashadda bandhigga. Baro faahfaahinta muuqaalka cusub ee uu qaadan doono nidaamka soo socda ee Google.
Si fudud Apollo Launcher. Bilaash, oo aan lahayn xayeysiis iyo wax ku wanaagsan Android kasta
Khiyaamo si wax badan looga helo Google Pixel 3 iyo 3 XL
Soo hel khiyaanooyinkan si aad uga faa'iideysato Google Pixel 3 iyo 3 XL qaab fudud. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fiican u isticmaasho taleefannada.
Astaamaha si aad uga faa'iideysato Khariidadaha Google
Soo ogow howlaha ugu fiican ee aan ku hayno Khariidadaha Google, oo aad sida ugu badan uga faa'iideysan karto codsiga marinka.
Soo ogow xulitaankan khiyaamada ah oo aad ugu habeysid isticmaalka Gmail-ka taleefankaaga Android qaab fudud oo aad wax badan uga hesho barnaamijka.
Soo ogow talaabooyinka lagu joojiyo gelitaanka otomaatiga ah ee Google Chrome taleefankaaga Android. Shaqo u karti uyeelay.
Sida loo kiciyo aqoonsiga iibsiga Google Play
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad u dhaqaajiso xaqiijinta wax iibsiga ee Google Play si aysan u iibsan codsiyo adiga oo aan ogolaansho lagaa helin.
Sida looga hortago cusbooneysiinta Play Store in ay ku bixiyaan xogta moobiilka
Haddii aad ka daashay aragtida sida heerkaaga xogta u duulayo, waa inaad ku bilowdaa inaad hagaajiso adeegyada Android ee marin u heli kara.
Sida loo shido ama loo damiyo hubaaha higaada ee Android
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aad u kiciso ama aad u joojiso higaadka higaada ee taleefankeena Android qaab fudud.
Sida loo beddelo cabbirka xarfaha ee Android
Soo ogow sida aan ula jaan qaadi karno cabirka farta ee taleefankeena Android si aad uga dhigto mid raaxo leh in la isticmaalo.
Waa maxay bloatware on Android?
Raadi wax badan oo ku saabsan bloatware iyo sababta ay ugu jirto taleefankaaga Android. Waxaad inbadan ka ogaan doontaa waxa ereygan yahay.
WhatsApp miyuu tirtiri doonaa fariimahaaga Noofeembar 12?
Raadi wax badan oo ku saabsan sida looga hortago WhatsApp inuu tirtiro keydkaaga ku keydsan Google Drive.
Sida loo rakibo Android 9 Pie ee Sony Xperia XZ Premium, XZ1 iyo XZ1 Compact: nooca cusub wuxuu u yimaadaa moodooyinkan
War wanaagsan dadow. Android Pie wuxuu imanayaa Sony Xperia XZ Premium, XZ1 iyo XZ1 Compact. Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo qalabkaaga.
[APK] Sida loo helo qaabka ugu sareeya ee toogashada Pixel 3 ee Google Pixel 2
Cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida loo helo Top Shot of Pixel 3 ee Pixel 2 adoo soo dejinaya oo ku rakibaya apk.
Istiikarada ugu fiican ee bilaashka ah ee WhatsApp
Hadda waxaad ku heli kartaa istiikarada ugu fiican WhatsApp-ka oo wata sheeko cusub oo imaatinka muuqaalkan weyn loola jeedo.
Tani waa sida kaaliyaha Amazon Alexa uu uga shaqeeyo Android-kayga
Sida looga soo kabsado qoraalada maqalka ee WhatsApp
Soo ogow siyaabaha kala duwan ee aad ugu soo ceshan karto qoraallada maqalka ah ee aan si khalad ah ugu tirtirnay WhatsApp-ka Android.
Fursadaha horumarinta si aad wax badan uga hesho taleefankaaga Android
Soo ogow seddexdan ikhtiyaar ee horumarinta si aad uga hesho waxyaabo badan taleefankaaga Android qaab fudud oo leh shaqooyin dheeri ah.
Sida loo rogo Android-kaaga loo yaqaan 'Oneplus 6T'
Sida looga qariyo sheekooyinkaaga Instagram dad gaar ah
Soo ogow sida aad u qarin karto sheekooyinkaaga Instagram si qaar ka mid ah kuwa raacsan aysan u arki karin.
Barnaamijyada Android ayaa cusbooneysiin doona markaad isticmaasho
Soo ogow API-ka cusub ee barnaamijyada Android ee kuu oggolaanaya inaad cusbooneysiiso intaad isticmaaleyso waxaadna tusi doontaa ogeysiisyo cusboonaysiin ah.
Hal UI: Isku xirnaanta cusub ee Samsung
Ka ogow wax badan oo ku saabsan is-dhexgalka cusub ee Samsung ee 'One UI', kaas oo si rasmi ah loogu soo bandhigay shirkii horumarinta.
Mophie kiiska sameeyaha baytariyada ayaa hadda soo saaray kiiska batteriga ee Casiirka oo loogu talagalay Samsung Galaxy Note 9
Sida loogaga qariyo ogeysiisyada dhibta leh barta wax lagu qoro ee TidyPanel
TinyPanel waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad qariso ogeysiisyada ku dhibaya inaad haysato meel ka nadiifsan moobiilkaaga.
Nexus 6P iyo Nexus 5X waxay helayaan cusboonaysiinkoodii ugu dambeeyay
Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta amniga ee ugu dambeeyay ee Nexus 6P iyo Nexus 5X ay helayaan hadda waxayna calaamadda u tahay dhamaadka taageerada.
Caprice, oo ah barnaamij raadiye runtii lagu xasuusto oo qaab aan xayeysiis lahayn ah
Sida loogu abuuro Stickers-ka WhatsApp-ka si fudud
Sida loo soo cesho mobilkaaga gacanta ee Android hadii aad hilmaamtay hannaankii ama lambarkii sirta ahaa
Soo ogow sida loogu soo ceshano taleefankeena Android haddii aan waayno lambarka sirta ah ama qaabka taleefanka.
Waa maxay farqiga u dhexeeya xirida ama hurdada arjiga Android
Soo ogow farqiga u dhexeeya xiridda iyo hurdada arjiga ku jira barnaamijka 'Android', si aan u ogaanno faraqa u dhexeeya labada erey.
Sida loogu goosto sawirrada qaab wareegsan oo Android ah
Ficil wax ku ool ah oo fudud oo aan ku sharraxeyno sida aad ugu gooyn karto sawirrada qaab wareeg ah oo ku saabsan Android iyada oo loo marayo Circle Cutter.
Sida loo hagaajiyo loona bedelo xulashada codka Samsung Galaxy kasta oo leh Kaaliyaha Codka
Kaaliyaha Codku waa barnaamij ka socda Samsung laftiisa oo ku daraya waxyaabo badan oo dheeri ah si loo xakameeyo codka sidaad u rabto Galaxy-gaaga.
Soo ogow taleefannada ka socda buug-yaraha 'Huawei' iyo 'Honor' ee la cusbooneysiin doono toddobaadkan Android Pie oo leh EMUI 9.0. si rasmi ah.
Sida loo isticmaalo daruuraha Telegram. Kaydinta bilaashka ah ee bilaash ah wixii aad rabto inaad kaydiso !!
Khiyaamada si aad ugala soo baxdo Gboard-ka Android
Soo ogow khiyaamadan si aad uga hesho waxyaabo badan oo Gboard ah taleefankeenna Android oo aad ugu adeegsato kumbuyuutarka qaab ka wanaagsan.
Sida loo rogo shaashaddaada Android madow iyo caddaan
Soo ogow habka ugu fudud ee aad ugu rogi karto shaashadda taleefankaaga Android madoow iyo caddaan dhowr tallaabo oo keliya.
Ku buuxi dhaladaada biyaha bilaash ah Tub: app aad u badan oo asal ah si loo yareeyo isticmaalka balaastigga
Tap wuxuu rabaa inuu yareeyo isticmaalka balaastigga maalin kasta dhalooyinka biyaha iyadoo la siinayo lacag buuxin bilaash ah.
Sida loo tirtiro taariikhda goobta Facebook
Soo ogow talaabooyinka si aad u tirtirto taariikhda goobta Facebook ee diiwaangelisa dhammaan dhaqdhaqaaqyadeena. Suuragal ka ah Android.
Sida loo soo cesho lambarka sirta ah ee lagu keydiyo Android-kaaga
Soo ogow sida loo helo dhammaan ereyada sirta ah ee aad ku keydisay taleefankaaga Android mahadnaqa Google's Smart Lock.
Tabaha lagu dalaco taleefankaaga Android si dhakhso leh
Soo ogow xeeladahan fudud ee aad si deg deg ah uga qaadatid taleefankaaga Android oo aad sidaas waqti u hesho haddii aadan lacag degdeg ah ku haysan.
Talooyin lagu nadiifiyo taleefankaaga Android habka ugu fiican
Soo ogow siyaabaha ugu wanaagsan ee aan ugu nadiifin karno taleefankeena Android tillaabooyin fudud oo aan waxyeelo u geysan taleefanka.
Sida loo beddelo magaca taleefankaaga si loogu aqoonsado Google Play
Soo ogow sida aan ugu badali karno magaca taleefankeena Google Play si aad si fudud ugu aqoonsan karto.
Codsiyada ugu fiican ee lagu duubo wicitaanada Android
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyadan kuu oggolaanaya inaad ku duubato wicitaanada ku jira Android qaab aad u fudud. Dhammaantood waa lacag la’aan.
Sida loo rakibo kumbuyuutar cusub taleefankaaga Android
Soo ogow sida aan u beddeli karno kumbuyuutarka aan ku isticmaalno taleefankeenna Android, iyo sidoo kale xulashooyinka la heli karo.
Sida loo badbaadiyo loona maareeyo furaha sirta ah ee Google Chrome ee loogu talagalay Android
Cashar fudud oo ficil ah oo aan ku tusinayno sida loo keydiyo loona maareeyo furaha sirta iyo cents ee Google Chrome ee Android.
Nolosha batteriga ee qaar ka mid ah taleefannada cusub ayaa xumaatay marka loo eego kuwii ka horreeyay
Waxqabadka batteriga ee qalabka cusub ayaa ka dhacay kuwii ka horreeyay. Waxaan ku siineynaa xogta ay imtixaanadu ka soo baxeen.
Sida looga saaro furaha kaarka SIM-ka ee Android
Soo ogow habka aan uga saari karno furaha SIM-ka taleefankaaga Android sidaasna uma baahnid inaad adeegsato lambar PIN ah.
Sida loo saxo mowduucyada Telegram
Soo ogow sida aan wax uga beddeli karno mawduucyada ku saabsan barnaamijka Telegram ee taleefankayaga Android oo markaa markaa u habayn karno isku xirkeeda
Huawei Mate 20 Pro wuxuu ku helaa EMUI 9.0.0.126 iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub. Waxaan kuu sharaxeynaa sida loogu rakibo qalabkaaga.
Sida loo rakibo nooca cusub ee OxygenOS 9.0.2 ee OnePlus 6
OxygenOS 9.0.2 ayaa hadda loo heli karaa OnePlus 6 oo leh astaamo iyo horumarinno badan oo cusub. Waxaan kuu sharxeynaa sida loogu rakibo qalabka.
Sida loola wadaago fiidiyowyada IGTV sheekooyinka Instagram: waxa ku cusub shabakadda bulshada
Instagram waxay ku dartay hawl cusub barnaamijka, waana inay la wadaagto fiidiyowyada IGTV sheekooyinka. Waan sharaxeynaa sida.
Google Play wuxuu diidayaa barnaamijyada aan loogu talagalin Android 8.0 Oreo
Barnaamijyada Google Play waa in lagu hagaajiyaa Android 8.0 Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan siyaasadda dukaanka cusub ee barnaamijyada loogu talagalay.
Sida loo qariyo haddii aad ku xiran tahay Facebook Messenger
Soo ogow sida loo qariyo xaaladaada internetka ee Facebook Messenger si aan qofna u arki karin xaaladaada internetka.
Waa maxay WiFi AC maxaase u wanaagsan in la isticmaalo
WiFi AC: waa maxay iyo faa iidooyinka ay na siiso. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan macnahan heerkani yahay iyo faa'iidooyinka ku isticmaalkiisa Android.
Sida loo aamusiiyo xiriirada barta Instagram
Raadi wax badan oo ku saabsan sida loo aamusiiyo xiriirada barta Instagram. Mahadsanid shaqadan, waxaad joojin doontaa inaad ka aragto daabacadaha xiriiriye.
Google wuxuu doortaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android ee 2018
Soo ogow barnaamijyada Android ee ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta Maaddada 2018 iyo sababaha.
Sida loo rakibo qalabka loo yaqaan 'Android 9.0 Pie beta' ee hoosta MIUI 10 ee Pocophone F1
Casharro aan ku sharaxeyno sida loo rakibo Android Pie on Pocophone F1. Noocaan cusubi wuxuu ku yimaadaa qaab beta qalabka ah iyo hoosta MIUI 10.
Sida loo kiciyo xaqiijinta laba-tallaabo ee Facebook, Twitter iyo Instagram
Soo ogow sida loo kiciyo xaqiijinta laba-tallaabo ee Facebook, Instagram iyo Twitter si loo hagaajiyo amniga koontadaada isticmaale.
Ku hel iPhone XS MAX Launcher bilaash wakhti xadidan
Sida loo abuuro Emoji Mini-gaaga muuqaalka cusub ee Gboard
Sida loo abuuro emojis-kaaga la beddeli karo Gboard. Soo ogow shaqada cusub ee barnaamijka kumbuyuutarka oo samee emojis kuu gaar ah.
Sida looga isticmaalo WhatsApp Web kombiyuutar kasta
Cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida looga isticmaalo WhatsApp Web kombiyuutar kasta qaab fudud, dhakhso iyo wax ku ool ah.
Sida loo kiciyo mowduuca mugdiga ah ee hagida Khariidadaha Google: waxa ku cusub barnaamijka khariidadaha
Khariidadaha Google waa la cusbooneysiiyay si aad u daarto mawduuca mugdiga ah ee marin haynta. Sidan ayaad kuheleysaa qaabkaas casriga ah.
Barnaamij 5-xidig loogu talagalay wax soosaarka !!
Soo ogow sida loola wadaago sawir bogga Instagram iyada oo loo marayo farriin gaar ah. Waxaad awoodi doontaa inaad la wadaagto daabacadaha dadka aad la xiriirto.
Soo ogow talaabooyinka la raaco si meesha looga saaro raaca barta Instagram. Talaabo talaabo talaabo ah loogu sharaxay arjiga.
Waa maxay xaqiijinta laba-tallaabada ah iyo sida looga kiciyo Google
Xaqiijinta laba-tallaabo: maxay tahay iyo sida looga hawlgeliyo Google. Raadi wax badan oo ku saabsan nidaamkan amniga iyo sida loo dhaqaajiyo.
Sida loo sameeyo akoonka emailka iCloud ee Android
Haddii aad ka tagto inaad haysato taleefanka iPhone-ka illaa Android, ujeedadu waa inaad si wadajir ah ugu sameyso koontada iCloud. Waxaan sharxeynaa sida loo qaabeeyo.
Sida loo xakameeyo cookies-ka iyo farriimaha asturnaanta ee loo adeegsado Browser Opera
Haddii aad ka daashay cookies-ka iyo farriimaha asturnaanta, qodobkan waxaan ku tusaynaa sida aan uga fogaan karno iyaga oo ugu mahadcelinaya waxqabadka cusub ee biraawsarka Opera
Motorola waxay soo bandhigtay Android Oreo 8.1 oo loogu talagalay Moto G5 iyo G5 Plus
Soo saaraha Motorola ayaa hadda soo saaray cusbooneysiinta ku saabsan Android Oreo 8.1 ee moodooyinka Moto G5 iyo Moto G5 Plus.
[APK] Sida loo yeesho 'Super zoom' ee Google Pixel 3 ee Pixel 2
Waxaan ku tusineynaa sida loo helo mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan Pixel 3 ee Pixel 2-kaaga oo sidaas awgeed ku qaado sawirro yaab leh.
Sida loogu diro farriimaha «WhatsApp-kayga»
Sida loo ogaado haddii qof kaa raadinayo Google adoo adeegsanaya ogeysiisyada Google
Soo ogow habka aan ku ogaan karno haddii ay naga raadinayaan Google adoo adeegsanaya Alerts Google. Mar kasta oo ay ku raadiyaan waxaad heli doontaa digniin.
Sidee loo arkaa nooca barnaamij aad ku rakibtay Android
Soo ogow qaababka si aad si sax ah u ogaatid nooca barnaamij ee aad ku rakibtay taleefankaaga Android. Talaabo talaabo loo sharaxay.
Maxay yihiin iyo maxay yihiin maareeyayaasha sirta ah ee loogu talagalay Android?
Maamulayaasha erayga sirta ah: maxay yihiin maxayse u yihiin? Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan Android ee naga caawiya maaraynta furaha sirta ah.
Android Oreo horeyba waa nooca labaad ee loogu adeegsiga badan yahay xogta qaybinta ee cusub ee Android
Raadi wax badan oo ku saabsan xogta cusub ee qaybinta Android ee ay daabacday Google taas oo Android Oreo ay ugu sarreyso nooca labaad ee ugu isticmaalka badan.
Sida looga baxo Facebook Messenger ee Android
Sida looga baxo Facebook Messenger. Soo ogow talaabooyinka si aad uga baxdo arjiga fariimaha ee Android.
Sida loo xiro taleefanka Android ee la xado
Soo ogow sida taleefankaaga Android uu u xiran yahay haddii la xaday, si aan qofna ugu helin qalabka iyo feylasha.
Soo ogow siyaabaha aan u heli karno si aan u ogaano in baytariga taleefankeena Android uu xaaladdiisu wanaagsan tahay. Laba hab oo 100% lacag la'aan ah.
Sida loo soo dejisto sawirro, fiidiyowyo ama sheekooyin Instagram
Soo ogow sida loo adeegsado barnaamijyadan barta 'Instagram' si aad ugu soo degsato sawirro, fiidiyowyo ama sheekooyin taleefankaaga Android qaab fudud.
Barnaamijyada xakamaynta waalidka ee ugu wanaagsan Android
Soo ogow barnaamijyadan kaa caawin doona inaad xakameyso waxa carruurtaadu ku sameeyaan taleefannadooda Android mar walba si fudud.
Sida loo helo kaamirada Xiaomi Mi Mix 3 ee Mi 8 iyo Mi Mix 2S
Ciaomi Mi 8 iyo Mi Mix 2S waxay heli doonaan cusbooneysiin weyn oo u oggolaan doonta iyaga inay yeeshaan kaameradda Mi Mix 3 ee dhowaan la bilaabay.
Sida loogu daro akoon cusub Google Chrome ee Android
Qodobkaan waxaan ku tusaynaa dhamaan tillaabooyinka la raacayo si aad ugudarsato koonto cusub Google Chrome si aad uqorto raadintayada iyo taariikhdeena.
Maxay uga dhigan tahay astaamaha xaaladda WhatsApp fariimaha
Micnaha astaamaha xaaladda farriinta ee WhatsApp. Soo ogow waxa astaamaha soo muuqda markay dirayaan farriimaha dalabka.
Barnaamijyada ugu fiican ee loogu talagalay hoverboards leh Bluetooth
Shanta barnaamij ee ugufiican ee loogu talagalay hoverboard leh Bluetooth. Soo ogow barnaamijyadan aad si fudud ugu xakameyn kartid hoverboard-kaaga.
Sida loo abuuro tuuryo ama toobiye wax kasta oo ku jira Android leh Shorty
Cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida loo abuuro tuuryo waxkasta oo ku jira mobilkaaga Android.
Sida looga baxo Google Chrome ee Android
Haddii aad ka daashay Google oo aad ogtahay mar walba bogagga internetka ee aad booqato, ikhtiyaarka ugu fiican ee looga hortagi karo tani waa adigoo ka baxa Google Chrome.
Haddii aad rabto inaad tirtirto taariikhda biraawsarkaaga Chrome, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo tallaabo tallaabo.
Haddii aad raadineysay waraaqda / darbiga cusub ee Razer Phone 2 uma baahnid inaad sii eegto. Halkan waxaan ku haynaa dhammaantood.
Soo ogow xeeladahan fudud ee aad ku yareyneyso isticmaalka xogta WhatsApp ee taleefankaaga Android. Ku ansax dhammaan noocyada Android.
Sida loo adeegsado muuqaalka cusub ee sabuuradda ee GBoard
Soo ogow sida aan u adeegsan karno hawsha kumbuyuutarka cusub ee horay loogu soo bandhigay barnaamijka GBoard ee ku saabsan Android.
Sida loo isticmaalo istiikarada cusub ee WhatsApp ama istiikarada
Warqad yar oo loogu talagalay WhatsApp ayaa noqotay barnaamijka ugu caansan ee fariimaha deg dega ah dhamaan. Baro sida loogu isticmaalo taleefankaaga Android.
Sida loo soo xigto farriinta ka timid xiriiriyaha WhatsApp oo leh tilmaam
WhatsApp shalay ayaa la cusbooneysiiyay qaabka xasilloon si aad u isticmaali karto tilmaam si aad u soo xigato farriimaha oo aad markaa si dhakhso leh uga jawaabto.
Launcher-ka ugu fiican Android !!, beddelka dhabta ah ee Nova Launcher
Sida loo kiciyo qoritaanka codka khadka tooska ah ee GBoard
Sida loo helo cod qorid khadka tooska ah ee GBoard. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan astaantan cusub kumbuyuutarka Google ee ku jira Android.
Waa maxay fargeeto Android? Waa maxay faa'iidooyinka ay bixiso?
Waa maxay fargeeto Android iyo faa iidooyinka ay leedahay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan faa'iidooyinka ay na siinayaan iyo waxa fargeetooyinkani ku jiraan Android.
Cusbooneysiinta cusub ee Facebook ayaa ogolaaneysa in heeso lagu daro sawirada iyo fiidiyowyada
Facebook ayaa ogolaan doonta in heesaha lagu daro sawirada iyo muuqaalada. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaantan cusub ee goor dhow iman doonta shabakadda bulshada.
Sida loo kiciyo habka habeenkii ee Samsung Browser Internetka
Haddii aad badanaa isticmaasho biraawsarka ay samaysay Samsung, waa inaad ogaataa shaqada kuu oggolaanaysa inaad dhaqaajiso habka habeenka, laakiin qodobkan ayaan kuu sharxi doonnaa.
Sida loo kiciyo keydinta xogta Facebook
Sida loo kiciyo keydinta xogta barnaamijka Facebook. Soo hel khiyaanadan si aad ugu badbaadi karto isticmaalka xogta moobiilka ee abka.
Beddelka ugu fiican ee Google Inbox
Shanta beddelka ugu wanaagsan ee Google Inbox loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijyadan beddelka ah ee Inbox. Hada la heli karo
Sida looga saaro lambarkaaga taleefanka barnaamijka Facebook. Soo ogow talaabooyinka si aad u tirtirto lambarkeena taleefanka ee ku jira arjiga.
Sida loo helo GBoard keyboard-ka sabeynta ee taleefankaaga Android
Sida loo isticmaalo GBoard keyboard-ka sabeynta ee Android. Raadi sida loo helo astaamaha cusub ee kumbuyuutarka ee taleefankaaga Android.
Codsiyada ugufiican ee shakhsiyeyn kara Android-kaaga Halloween
Xulashada ballaaran ee codsiyada, mawduucyada, furayaasha iyo wax kasta oo aad u baahan tahay si aad shakhsi uga dhigto taleefankaaga Android Halloween this 2018.
Sida loo tirtiro emaylka ku jira Gmail ee loogu talagalay Android. Raadi wax badan oo ku saabsan habka aan u joojin karno shixnad la sheegay.
Sida loo xaqiijiyo koontadaada ee Instagram iyo shuruudaha ay tahay in la buuxiyo. Soo ogow talaabooyinka si aad uga xaqiijiso koontadaada shabakada bulshada.
Codsiyada lagu daawado filimada cabsida leh ee bilaashka ah ee Halloween
Codsiyada ugufiican ee lagu daawado filimada naxdinta leh bilaashka Halloween. Soo ogow barnaamijyadan Android si aad u aragto filimada ugu fiican Halloween.
Khiyaamo si wax badan looga helo Qariiradaha Google
Ka hel waxbadan Khariidadaha Google khiyaamadahan. Raadi wax badan oo ku saabsan tabahaan si aad wax badan uga hesho arjiga.
Sida loo nadiifiyo taariikhda raadinta barta Instagram
Sida loo nadiifiyo taariikhda raadinta ee Instagram-ka 'Android'. Soo ogow talaabooyinka si aad uga nadiifiso taariikhda raadinta abka.
Sida loo kiciyo loona isticmaalo dareeraha infrared ee Pocophone F1 kamarad ahaan
Tutorial kaas oo aan ku siineyno talaabo talaabo ah sida loo kiciyo loona isticmaalo dareenka infrared ee Xiaomi Pocophone F1 qaab fudud.
Sida loo helo warqad kala duwan oo maalinle ah oo Android ah
Ku beddel darbigaaga Android maalin kasta barnaamijkan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijkan kuu oggolaanaya inaad beddesho gidaarka gidaarka.
Sida loogu wareejiyo wada sheekaysiga WhatsApp hal taleefan Android ah oo loo wareejiyo mid kale
Sida loogu wareejiyo wada sheekaysiga WhatsApp taleefan kale. Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad uga gudubto wada hadaladan.
Seddex khiyaano ah si aad wax badan uga hesho Waze on Android. Soo ogow khiyaamadan fudud si aad ugu adeegsato barnaamijka Android-ka si hufan.
Cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida loo kiciyo keydinta xogta Instagram, talaabo talaabo ah, marka aan tagno Wi-Fi la'aan.
3-da ayaa ah kuwa ugu qabow Qariiradaha Google sanadihii la soo dhaafay
Khariidadaha Google ayaa sii wadaya inay qaddariyaan astaamaha cusub sida wadaagista liiska kuwa ugu cadcad ama ogaanshaha halka laga qaadayo gaariga korontada ku shaqeeya. Waxaa jira 3 cusub oo aad u qabow.
Sida looga hortago iskudhaca fiidiyowga ee Twitter
Sida looga hortago fiidiyowyada inay si toos ah uga ciyaaraan Twitter. Soo ogow sida shaqadan loogu dhaqaajin karo abka.
Sida loo tirtiro koontadaada Google
Sida loo tirtiro koontadaada Google talaabo talaabo. Soo ogow waxa ay tahay inaan sameyno si aan ugu tirtirno akoonkeena Google qaab fudud.
Sida loo abuuro sawiro 3D leh muuqaalka cusub ee Facebook
Sida loo abuuro sawirro 3D ah Facebook. La soco waxbadan oo ku saabsan astaamaha cusub ee horeyba ugu soo degay shabakada bulshada isla markaana dhowaan iman doona Android.
Sida loo beddelo luqadda uu adeegsaday Kaaliyaha Google. Soo ogow tallaabooyinka aad ku beddeli karto luqadda uu kaaliyaha ku hadlayo taleefanka.
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo Xaaladda Waxqabadka barta Instagram
Ku dhaji taas oo aan ku sharaxeyno sida loo kiciyo ama loo joojiyo xaaladda waxqabadka barta Instagram.
Sida loo kiciyo Google Chrome xayeysiiyaha xayeysiiska ah
Sida loo dhaqaajiyo xayiraadaha xayeysiiska ee Google Chrome. Soo ogow talaabooyinka aad ku dhaqaajineyso xayeysiiyaha xayeysiiska ah ee biraawsarka.
Haddii aad haysatid mobilada loo yaqaan "Android One" waxaad hadda haysan kartaa Google ee "Digital Wellbeing"
Fayo-dhawrka Dijital ah waa dhowr qalab oo lagu xakameeyo isticmaalka xad-dhaafka ah ee waqtiga ee aan inta badan ku leenahay taleefannada casriga ah.
Sida loo xasuusto marwalba meeshii aan dhiganay Khariidadaha Google
Thanks to Maps Google, waxaan ogaan karnaa wakhti kasta halka aan dhiganay markii ugu dambeysay ee aan si dhaqso leh oo fudud aan gaariga u qaadno.
Sida loo kiciyo keydinta xogta ee Facebook Messenger
Sida loo kiciyo keydinta xogta ee Facebook Messenger. Soo ogow talaabooyinka aad ku dhaqaajineyso shaqadan ku jirta arjiga fariinta.
[APK] Sida loo adeegsado Facebook-ga cusub ee 360º Sawirrada shaqeynta
Waxaan kusoo laabaneynaa cashar fiidiyow oo aad iyo aad u fudud taas oo aan ku tusayo sida loo adeegsado shaqooyinka cusub ee Facebook 360º Sawirada, cashar cusub oo Video ah oo aan ku tusayo talaabo talaabo talaabo ah sida loo adeegsado shaqooyinka cusub ee noo ogolaanaya si aad sawiro uga qaadatid 360º Facebook.
Ma tirtirtay koontadaada Google? Marka waad heli kartaa
Sidee ugu soo kabataa koontadaada Google saddex talaabo. Raadi wax badan oo ku saabsan talaabooyinka si aad ugu soo kaban karto koontadayada Google si fudud.
Cashar fudud oo aan ku tusinayno sida loo daro ama loogu daro hal ama in ka badan koontooyinka Gmail ee loogu talagalay barnaamijka 'Google mail app'.
Huawei Mate 20 Pro, dareenka ugu horreeya ee terminaalkan weyn
In Androidsis waxaan kuu soo qaadaneynaa dareenkeena ugu horeeya ee ku saabsan Huawei Mate 20 Pro ka dib markii ugu horeysay ee la isticmaalo, nala joog oo soo hel.
Sida loo galo goobaha sida The Pirate Bay, Roja Directa iyadoon loo baahnayn VPN iyo laga helo shabakadda shabakadda ee aad jeceshahay
Shirkadda Google ayaa lacag ka qaadi doonta soo saarayaasha si ay u adeegsadaan barnaamijyadooda ku shaqeeya barnaamijka Android
Soo-saareyaashu waa inay ku bixiyaan Google barnaamijyadooda Android. Ka ogow wax badan oo ku saabsan isbeddelka siyaasadda rukhsadda Google ee Android.
Sida loo sahlo ka saarida USB-ga taleefankaaga Android
Sida loo sahlo ka saarida USB-ka taleefanka Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida muuqaalkan loo hawl gelin karo.
Sida loogu furo kombuyutarkaaga kumbuyuutar kumbuyuutareedka gacanta ee moobilkaaga Android
Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'Unlock Fingerprint Unlock' waxaan ku furi karnaa Windows PC-keena iyo dareeraha faraha ee aan ku haysanno moobiilkeenna Android.
Sida loo qaabeeyo ogeysiinta WhatsApp
Sida loo rakibo ogeysiisyada WhatsApp ee ku saabsan Android. Raadi wax badan oo ku saabsan habka aan u qaabeyn karno ogeysiisyadan.
Sida loo kiciyo habka Battery Saver ee Android iyo maxaa loogu talagalay
Boosto aan ku sharaxno waxa batteriga ama habka keydinta tamarta ay ka kooban tahay iyo sida looga dhaqaajiyo taleefankaaga Android.
Sida loo abuuro koox WhatsApp. (Wax ka beddel oo habee)
Ku dhaji taas oo aan ku siineyno talaabo talaabo ah sida loo abuuro koox WhatsApp-ka ah, wax ka bedel oo u qaabee si ay ula xiriiraan dad badan isla waqtigaas.
Sida loo beddelo bogga hore ee Google Chrome ee ku saabsan Android
Sida loo beddelo bogga hoyga Google Chrome. Soo ogow habka ugu fudud ee aad ugu beddeli karto bogga bogga biraawsarka.
Sida loo dhoofiyo liiskaaga Spotify
Sida loo dhoofiyo liiska Spotify. Soo ogow aaladda ugufiican ee aad ku dhoofin karto liisaskaan oo ku saabsan barxadda socodka.
Sida loogu isticmaalo emayllada qarsoodiga ah Gmail-ka. Raadi sida loogu isticmaalo shaqadan arjiga.
Sida loo tirtiro duubista codkaaga ee Kaaliyaha Google
Sida looga tirtiro amarrada ku kaydsan Kaaliyaha Google. Raadi wax badan oo ku saabsan sida loo tirtiro duubitaanadan.
Sida loo kiciyo tarjumaadda otomaatiga ah ee Google Chrome ee ku jirta Android
Sida loogu hawlgeliyo tarjumaadda otomaatiga ah Google Chrome. Soo ogow talaabooyinka si aad ugu hawlgeliso shaqadan biraawsarka ee Android.
Waa maxay iyo sida loo soo dejiyo APK ah taleefankeena Android
Waa maxay APK iyo sidee loogala soo degaa taleefankeenna Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noocyada faylalka ay yihiin iyo sida loo soo dejisto.
Sida loo calaamadiyo wada sheekaysiga sida loogu akhriyo WhatsApp. Soo ogow sida ugu fudud ee aad ugu oggolaan karto in ogeysiiskaan meesha looga saaro haddii aynaan akhrin fariimaha.
Sida loo kiciyo keydinta xogta barta Twitter. Soo ogow talaabooyinka aad ku yareyn karto isticmaalka xogta ee barnaamijka Twitter.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee raadinta macluumaadka
4 codsiyada Android si aad u raadiso macluumaad. Soo ogow barnaamijyadan aad si fudud ugu raadin karto macluumaadka.
Muuqaalka kumbuyuutarka ee ay soo bandhigaan daalacashada taleefannada casriga ahi wuxuu noo oggolaanayaa inaan booqanno shabakadda sidii inaan ka qabanayno kombuyuutar.
Maxay yihiin waqtiyada soo noqoshada Google Play?
Dhammaan waqtiyada soo noqoshada Google Play. Soo ogow jadwalka wakhtiga aad ku soo celin karto Google Play.
Sida loo tuuro Netflix iyo Spotify waxyaabaha ku jira Kaaliyaha Google ee Chromecast ee ku yaal Google Home cusub
Adeegso amarka codka: "Waxyaabaha Cajaa'ibka ku ciyaar qolka fadhiga" si aad ugu dirto Netflix iyo Spoti waxyaabaha ku jira Chromecast oo ay weheliso Kaaliyaha Google.
Sida loo helo lacag celinta Google Play
Sida loo helo lacag celin Google Play. Soo ogow talaabooyinka lagu soo celiyo ka dib markii aad ka iibsato app dukaanka.
Sida loo banneeyo booska koontadaada Google Drive
Sida loo banneeyo booska Google Drive. Soo ogow dariiqooyinka aad booska uga furan karto koontadaada Google Drive si fudud.
Sida loogu calaamadeeyo ereyada geesinimo, xaraf, istiraatiijiyad ama ku dhex yaal WhatsApp
Cashar fudud oo aan ku sharaxeyno sida loogu calaamadeeyo ereyada geesinimo, xaraf, istiraatijiyad iyo muuqaalka WhatsApp.
Sida loo rogo Android-kaaga Pixel 3
[APK] Sida loo haysto Xiaomi Animoji taleefan kasta oo Android ah
Deked uu sameeyay horumariyaha XDA Forums wuxuu kuu ogolaanayaa inaad haysato Animoji fiican oo Xiaomi ah oo ku taal Android 5.0 ama taleefan ka sareeya.
Ku dhaji taas oo aan ku sharaxeyno sida loo nadiifiyo keydka barnaamijyada taleefankaaga Android si aad uhesho meel badan oo lagu keydiyo.